DA- BW19002 kukanda simbi cookware 2020 inopisa kupisa
Dzetsika dzekutsvaira pani dzinogona kubika zvisina kuenzana, kazhinji zvichikonzera nyama yakanyanya kuomesesa kudya. Nyowani uye yakavandudzwa! Hingi dzinopindirana dzakaparadzaniswa kuitira kukurumidza kupisa uye nyore kuchenesa. Kanda musiyano wesimbi ne skillet yako nyowani inoparadzanisa kupisa zvakaenzana kuitira kunyatso kubikwa, nyama yekuwedzera-nyoro. Iyo inonaka uye yakasvibirira
Slim mbiri inotora nzvimbo shoma shoma kupfuura simbi yemagetsi.
DA-BW24002 cast iron cookware 2020 inotengeswa inotengeswa yakaitwa muChina
DA-BW32001 vakakanda simbi cookware DISA
DA-BW18001 yakakanda simbi 2020 inopisa kupisa